Ogaden News Agency (ONA) – Angela Merkel & Obama oo Cambaareeyay Madaxwaynaha Ruushka.
Angela Merkel & Obama oo Cambaareeyay Madaxwaynaha Ruushka.
Madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ayaa khadka teleefonka kula hadley Mustashaarka dalka Jarmalka Angela Merkel maalintii Khamiista ahayd.
Labadan Hoggaamiye ayaa si wadajir ah u canbaareeyey duqeynta waxshinimada leh ee Ruushka iyo xukuumadda Suuriya ay ku hayaan Bariga Magaalada Xalab. Waxay isku waafaqeen Obama & Merkel in Ruushka iyo Xukuumadda Suuriya ay si gaar ah masuul uga yihiin dagaalka Suuriya, waxaana ay diideen in fursad lasiiyo gargaarka bini’aadanimo in uu gaadho qaybaha la go’doomiyey ee dalka Suuriya.
Todobaadkii hore ayey ahayd markii ciidamada Bashar Al-Assad oo taageero ka helaya diyaaradaha dagaalka ee Ruushku ay qaadeen weerar aad culus oo ay ku doonayaan in ay ku qabsadaan Bariga magaalada Xalab ee jamhaduhu maamulaan, boqolaal gantaalaha diyaaradaha ah ayaa ku dhacay burburka dhismayaasha Xalab, waxaana ku geeriyoodey in badan oo kamid ahaa dadkii ku hadhay magaalada.
Sida laga soo xiganayo Qaramada Midoobay (QM) ugu yaraan 96 caruur ah ayaa ku geeriyoodey todobaadkii u dambeeyey, waxaana Ban Ki-moon ku tilmaamey Xalab in ay noqotey mid ka xun kawaanada dhiigu qul-qulo.
Wasiirka Arimaha Dibadda ee Maraykanka John Kerry ayaa sheegay maalintii shalay in Maraykanku ka baxayo dhamaan wada-shaqeyntii ay la wadaageen dalka Ruushka ee kusaabsanayd arrimaha dalka Suuriya.